Homeरोचकविवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य..
August 16, 2020 admin रोचक 227453
हिन्दु धर्ममा सिन्दुर विवा’हित महिलाहरुको विवाह’को प्रतिक हो। तर यो कुरा बुझ्न जरुरी छ की आखिर विवाहित महिलाले सिउँदोमा सिन्दुर लगाउनुको पछाडिको कारण के छ ?
मान्यता’अनुसार सिउँदोमा सिन्दुर लगाउनाले प’तिको दिर्घायु हुने र महिलाको सौभाग्यमा वृद्धि हुन्छ। आखिर महिलाले सिउँदोमा सिन्दुर किन भर्छन त ? आउनुहोस, थाहा पाईराखौं यसको पछाडिको धार्मिक मान्यता
दुवै एकअर्काका लागि बनेका थिए र एकअर्काका लागि उचित थिए। काला’न्तरमा दुबैले विवाह पनि गरे। यसै क्रममा एकदिन यी दुई शिकारमा निस्किए त्यसैबखत एक कालिया नामक दानवको गिद्दे नजर धीरा माथि पर्यो।
धीराको सुन्दरता देखि का’लियाको मनमा नकारात्मक विचार आउन थाल्यो र उनले धीरालाई आफ्नो बनाउने निर्णय गरे। शिकार गर्दा गर्दै रात पर्यो। धीरा र वीराले जंगलमै रात कटाउने फैसला गरे र एक पहाडमा गएर बास बसे।
त्यसै’बेला धीरालाई पानी प्यास लाग्यो बिरा उनका लागि पानि लिन गए। बिरा पानी लिन गएको मौका पारि कालियाले वीरामाथि आ’क्र’मण गर्यो। कालि’याको आ’क्रम’णले वीरा नराम्रोसँग घाइते भए ।
घाइते वीराको चिच्या’हट सुनी धीराले का’लियामाथि आ’क्र’मण गरि उनलाई मा”रि’दिईन।धीराको यस्तो साहस देखेर वीरा खुसी भई आफ्नो र’ग’तले र’गतले उनको सिउँदो भरिदिए। भनिन्छ त्यसैबेलादेखि विवाहित महिलाले सिउँ’दोमा सिन्दुर लगाउने परम्परा चलिआएको हो। उसो त हिन्दु सभ्यतामा सि’न्दुरलाई लिएर हनुमानको कहानी पनि निकै नै प्रचलित छ तर धीरा र वी’राको यस कहानीलाई पनि क’तिपयले मान्ने गरेका छन।
September 19, 2020 admin रोचक, समाचार 229642
August 2, 2020 Administer Banner Post, अन्तर्राष्ट्रिय, भिडियो, मनोरंजन, रोचक, समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली 159636
August 2, 2020 Administer रोचक, समाचार 59831
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227453)